Iningi lezikhungo ezinhlanu ze-axis machining zamukela ukwakheka okungu-3 + 2, okungukuthi, i-XYZ izimbazo ezintathu ezinyakazayo ezihamba phambili kanye nezimbili ze-ABC ezintathu ezijikeleza zizungeze i-XYZ eksisi ngokulandelana. Ukusuka kwisici esikhulu, kukhona i-kyzab, xyzac ne-xyzbc. Ngokuya ngohlobo lwenhlanganisela yamazembe amabili ajikelezayo, kungaba div ...
Kufanele sikhethe kanjani ngokunembile abakhiqizi bekhwalithi ephezulu ye-CNC
Izinsizakusebenza eziyinhloko ezisezingeni eliphakeme zabaphakeli bezimboni ezisebenza ngomshini zigxile ePearl River Delta naseYangtze River Delta esifundeni, lapho inani labakhiqizi bokulungisa i-lathe ye-CNC nalo liyiqembu elikhulu kakhulu. Ngakho kanjani ngokunembile ukhethe CNC lathe ukucutshungulwa manufactu ...
Liyini ikusasa lobuchwepheshe bemishini ye-NC nokuthi ungakhetha kanjani?
E-China, i-CNC machining okukhethekile sekuyinto yonke kule minyaka eyishumi edlule, futhi abakhiqizi bamathuluzi we-CNC nabo baqhakaza yonke indawo. Umbundu wamabhizinisi we-NC machining uya ngokuya ngokuya ephansi, futhi ukusetshenziswa kobuchwepheshe bokukhethekile kwemishini ye-NC kusetshenziswa kabanzi. ...
Ukulawulwa kwemishini nokunemba kwe-CNC lathe ekukhiqizeni
Ukulawulwa kokunemba kwemishini kwe-CNC lathe ekukhiqizeni Ithonya le-CNC lathe machining ukunemba ngokuvamile kubangelwa izizathu ezimbalwa ezilandelayo, esinye isizathu semishini, eyesibili inkinga yamathuluzi, eyesithathu ukuhlela, eyesine iphutha lokuma, namuhla uWally machin ...
Ungakuthuthukisa kanjani ukusebenza kahle kwethu kokukhiqiza ngokusebenzisa uhlelo lwe-CNC machining centre
Ngo-CNC ngokunemba machining, ukuthi ungathuthukisa kanjani ukusebenza kahle kokukhiqiza ngokusebenzisa i-CNC machining center programme kuyinkambo edingekayo yabasebenza ngemishini. Izici ezithinta ukusebenza kahle kwe-CNC zibandakanya izinkinga zamathuluzi, izinkinga zokulungisa, imingcele yemishini, njll, futhi lezi zici zihambisana ...
Umkhakha wokucubungula we-CNC ngemuva kuka-2019, amabhizinisi amaningi aya ezwa ukuncipha kwama-oda emakethe. Ungayiphatha kanjani imboni yokucubungula i-CNC sekuyisihloko esikhathaza osomabhizinisi abaningi. I-Wally imishini ubuchwepheshe ibisebenza embonini yokucubungula ye-CNC iminyaka eminingi, futhi i-als ...
Ungakugwema kanjani ukwenzeka kokushayisana ekukhiqizeni kwansuku zonke kwe-CNC machining nge-lathe
Enkambisweni yokucubungula kwemishini yansuku zonke, i-CNC machining centre processing inqubo ejwayelekile kakhulu, kanye nenqubo ethembeke kakhulu yokwenza imishini ngokunemba. Lapho sijabulela imishini ephezulu ukuxazulula izinkinga zokucubungula, indlela yokuvimbela isikhungo semishini se-CNC ekushayeni i-m ...
Isicelo kanye mkhuba esizayo ujike Milling kwakwakhe machining embonini
Namuhla, ngokuthuthuka okusheshayo komkhakha wokucubungula imishini yasekhaya, ukuvuselelwa kwemishini nakho kuyashesha futhi kuyashesha. Jika wokugaya esiyinhlanganisela ukucutshungulwa iye yaba ubuchwepheshe ezivamile ukucutshungulwa. Kungani abantu abaningi bebheka ukujika kokugaya ukwenziwa kokuhlanganiswa njengokuphambili ...
Ungayikhetha kanjani imingcele yokuphakelayo efanele ye-CNC lathe ezingxenyeni zokucubungula ukuqinisekisa ukunemba komkhiqizo
In inqubo mechanical izingxenye ukucutshungulwa, CNC lathe kuyinto ezivame kakhulu CNC imishini ukucutshungulwa. Ungakuqinisekisa kanjani ngokunemba ukucutshungulwa komkhiqizo? Ukusetha ukusika kokuphakelayo kwemingcele ye-CNC lathe kuyindlela eyiyo yokuqinisekisa ukunemba kobukhulu bemikhiqizo. Ngemuva kwalokho uWally machin ...
Ungakuhlola kanjani ukunemba kwe-CNC machining center quotation lapho uthenga izingxenye ezinemba kahle
Lapho amabhizinisi ethenga izingxenye ezinemba kahle, ikhotheshini ye-CNC machining centre enikezwa abahlinzeki ayinakuhlolwa ngokunembile, okuholela ekukhetheni abahlinzeki, okuholela ekwehlisweni kwekhwalithi yomkhiqizo nokulibaziseka kokulethwa. Kufanele kanjani sihlole ngokunembile ikhotheshini CNC machin ...
Ukunemba machining isikhungo ngokuvamile ukwahlulelwa kuzo ziphi izici
Ihileleke embonini yokucubungula ngomshini, imishini yokucubungula i-CNC ibalulekile, evame ukubizwa ngokuthi isikhungo semishini, esaziwa nangokuthi yi-computer gong. Ukuthi isikhungo semishini singahlangabezana yini nezidingo zokunemba kwemikhiqizo yokucubungula, eyokuqala ukuthi ukunemba kwesikhungo semishini uqobo kuyi-h ...
Sibutsetelo CNC machining ukunemba machining
Esikhathini machining nsuku zonke, ukunemba machining CNC thina ngokuvamile ubheke kuhlanganisa izici ezimbili. Isici sokuqala ukunemba kokusebenza kokucutshungulwa, kanti isici sesibili ukunemba komphezulu kokucubungula, okubuye kube ukuqina kwendawo esivame ukukusho. Ake sichaze kafushane ...